२० वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको टिमले जितेको छैन विश्वकप, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
२० वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको टिमले जितेको छैन विश्वकप
एजेन्सी। रुसमा जारी विश्वकप अन्तिम चरणमा छ । विश्वकपको जारी २१ औं संस्करणमा अब २ खेल मात्र खेल्न बाँकी छन् । भोलि तेस्रो स्थानको लागि हुने खेलमा बेल्जियम र इङल्याण्ड भिड्दैछन् । आइतबार उपाधिको लागि क्रोएसिया र फ्रान्स भिड्नेछन् । फ्रान्स तेस्रो पटक फाइनल पुगेको हो भने क्रोएसिया पहिलो पटक फाइनल खेल्दैछ ।
विश्वकपको ८० वर्ष लामो इतिहासमा निकै रोचक तथ्यांक छ । अहिलेसम्म भएका २० विश्वकपमध्ये उपाधि विजेता टिमका खेलाडीले १०–१० पटक मात्र गोल्डेन ग्लभ (सर्वोत्कृष्ट गोलकिपर) र गोल्डेल बल (सर्वोत्कृष्ट खेलाडी) को उपाधि जितेका छन् । १०–१० पटक भने सर्वोत्कृष्ट किपर र सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले विश्वकपको उपाधि जित्न सकेनन् । अझै रोचक त के भने विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्दै गोल्डेन बुट जित्ने खेलाडीको टिमले ५ पछक मात्र उपाधि जित्न सकेको छ । १५ विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीको टिमले उपाधि जित्न सकेन । यस पटक पनि सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीमा सबैभन्दा अगाडि रहेका इङल्याण्डका कप्तान ह्यारी केनको टिम सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ ।
२० वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको रुपमा गोल्डेन बल जित्ने खेलाडीको टिमले उपाधि जित्न सकेको छैन । विश्वकप इतिहासमा १० पटक विजेता टिमका खेलाडीले गोल्डेन बल जितेको भए पनि पछिल्ला ५ विश्वकपमा भने गोल्डेन बल विजेताले उपाधि जित्न सकेका छैनन् । यी ५ विश्वकपमध्ये ४ मा फाइनलमा र १ मा सेमिफाइनलमा गोल्डेन बल विजेताको टिम हारेको छ । पछिल्लो पटक गोल्डेन बल र उपाधि दुवै जित्ने खेलाडी ब्राजिलका रोमारियो डिसुजा हुन् । उनले १९९४ मा गोल्डेन बल र उपाधि दुवै जितेका थिए ।
त्यसपछि १९९८ मा ब्राजिलका रोनाल्डोले गोल्डेन बल जितेका थिए । उनको टिम फाइनलमा फ्रान्ससँग हार्यो । २००२ मा गोल्डेन बल जित्ने जर्मनीका ओलीभर कानको टिम फाइनलमा ब्रजिलसँग हारेको थियो । २००६ मा फ्रान्सका जिनेदिन जिदानले गोल्डेन बल जिते तर उनको टिम फाइनलमा इटलीसँग हार्यो । २०१० मा उरुग्वेका डिएगो फोरलानले गोल्डेन बल जिते तर उनको टिम फाइनल पनि पुग्न सकेन । उरुग्वे सेमिफाइनलमै नेदरल्याण्डससँग हारेको थियो । २०१४ मा अर्जेन्टिनाका लियोनेल मेस्सीले गोल्डेन बल जिते तर उनको टिम फाइनलमा जर्मनीसँग हार्यो ।
२००२ पछि सर्वाधिक गोल गरेर गोल्डेन बुट विजेताको टिमले पनि उपाधि जित्न सकेको छैन । अहिलेसम्म २० विश्वकपमध्ये गोल्डेन बुट विजेताको टिमले ५ विश्वकप मात्र जित्न सकेको छ । पछिल्लो पटक २००२ मा ब्राजिलका रोनाल्डोले ८ गोल गर्दै गोल्डेन बुट जितेका थिए र उनको टिमले उपाधि पनि जितेको थियो । त्यसपछि २००६ मा जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोज, २०१० मा जर्मनीकै थोमस मुलर र २०१४ मा कोलम्बियाका जेम्स रोड्रिगुएजले गोल्डेन बुट जिते तर उनीहरुको टिमले उपाधि जित्न सकेन । यद्यपि पहिलो विश्वकपमा भने गोल्डेन बुट जित्ने खेलाडीले उपाधि पनि जितेका थिए । १९३० मा उरुग्वेका गुइलेर्मो स्टेबिले, १९६२ ब्राजिलका गेरिनचा र वावा, १९७८ मा अर्जेन्टिनाका मारियो क्याम्पेस, १९८२ मा इटलीका पाओलो रोसी र २००२ मा ब्राजिलका रोनाल्डोले मात्र गोल्डेन बुट र उपाधि दुवै जितेका छन् ।